အိမျစာ မလုပျခဲ့တဲ့ ကြောငျးသားကို ထိုငျထ အကွိမျ ၁၀၀ လုပျခိုငျးရာမှ ကြောငျးသားသဆေုံး – Myanmar
ထိုငျးနိုငျငံက ကြောငျးတဈကြောငျးဟာ အိမျစာမလုပျခဲ့တဲ့ အသကျ ၁၃ နှဈအရှယျ ကြောငျးသားကို ဆရာဖွဈသူက ထိုငျထ အကွိမျ ၁၀၀ လုပျခိုငျးရာက သဆေုံးသှားခဲ့တာကွောငျ့ တောငျးပနျခဲ့ရပါတယျ။
ကြောငျးသားလေးဟာ သွဂတျဈလ ၃၁ ရကျနကေ့ ဖြားနာမှုကွောငျ့ ဆေးရုံတကျနခေဲ့ရပွီး စကျတငျဘာလ ၂ ရကျနမှေ့ာ ဆေးရုံက ဆငျးခဲ့ပါတယျ။ ဒီနောကျ ကြောငျးတကျဖို့သှားရာမှာ ကြောငျးကဆရာဖွဈသူက အိမျစာတှမေပွီးလို့ဆိုပွီး ထိုငျထ အကွိမျ ၁၀၀ လုပျခိုငျးခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒီနောကျ စကျတငျဘာ ၄ ရကျနမှေ့ာ ကြောငျးသားလေးဟာ ပွနျဖြားခဲ့ပွီး စနနေေ့ မနကျမှာ အိပျယာက မထတာကွောငျ့ စဈဆေးကွညျ့ရာမှာ မနကျခငျး ၃ နာရီဝနျးကငျြလောကျတညျးက အိပျနရေငျး ကှယျလှနျသှားတယျလို့ သိရပါတယျ။
ကလေးငယျရဲ. နာမကနျြးဖွဈနမှေုအအခွအေနကေို ကြောငျးဖကျက သိရှိထားခွငျး မရှိခဲ့လို အခုလို ဖွဈခဲ့ရတာလို့ ယူဆရပါတယျ။ ဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသတျပွီး ကြောငျးဖကျက စုံစမျးစဈဆေးမှုတှပွေုလုပျနပွေီး ကြောငျးသားရဲ. အုပျထိနျးသူတှကေိုလညျး တောငျးပနျခဲ့တယျလို့ သတငျးတှမှော ဖျောပွထားပါတယျ။
အိမ်စာ မလုပ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားကို ထိုင်ထ အကြိမ် ၁၀၀ လုပ်ခိုင်းရာမှ ကျောင်းသားသေဆုံး
ထိုင်းနိုင်ငံက ကျောင်းတစ်ကျောင်းဟာ အိမ်စာမလုပ်ခဲ့တဲ့ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားကို ဆရာဖြစ်သူက ထိုင်ထ အကြိမ် ၁၀၀ လုပ်ခိုင်းရာက သေဆုံးသွားခဲ့တာကြောင့် တောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်။
ကျောင်းသားလေးဟာ သြဂတ်စ်လ ၃၁ ရက်နေ့က ဖျားနာမှုကြောင့် ဆေးရုံတက်နေခဲ့ရပြီး စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့မှာ ဆေးရုံက ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက် ကျောင်းတက်ဖို့သွားရာမှာ ကျောင်းကဆရာဖြစ်သူက အိမ်စာတွေမပြီးလို့ဆိုပြီး ထိုင်ထ အကြိမ် ၁၀၀ လုပ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒီနောက် စက်တင်ဘာ ၄ ရက်နေ့မှာ ကျောင်းသားလေးဟာ ပြန်ဖျားခဲ့ပြီး စနေနေ့ မနက်မှာ အိပ်ယာက မထတာကြောင့် စစ်ဆေးကြည့်ရာမှာ မနက်ခင်း ၃ နာရီဝန်းကျင်လောက်တည်းက အိပ်နေရင်း ကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကလေးငယ်ရဲ. နာမကျန်းဖြစ်နေမှုအအခြေအနေကို ကျောင်းဖက်က သိရှိထားခြင်း မရှိခဲ့လို အခုလို ဖြစ်ခဲ့ရတာလို့ ယူဆရပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျောင်းဖက်က စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီး ကျောင်းသားရဲ. အုပ်ထိန်းသူတွေကိုလည်း တောင်းပန်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပိရမဈ အောကျမှ လြှို့ဝှကျဆနျးကွယျ ပွဒါးမွဈအကွောငျး